Dhegayso:Somaliland oo ka digtay in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya
Home /Blog/Dhegayso:Somaliland oo ka digtay in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhuuriyada iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo maanta jeediyey khudbad uu ugu talo galay maalinta 18-ka May ee gooni u istaaga Somaliland wuxuu kaga hadlay codsiga dawlada Federaalka Soomaaliya ee ku aadan in laga qaado dalka Soomaaliya cunoqabareynta hubka arrintaasi oo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kaga codsaday shirkii dhawaan lagu qabatay magaalada London ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya.
“Maanta Umadda Soomaaliyeed way kala tagtay, wayna kala tashatay oo ma jirto dal iyo dalwad ka dhaxaysa oo ay wadaagaan, haddii qayb ka mid ihi ee laga qaado cunaqabateynta hubka ama dunidu hubayso waa hubaal inay tallaabadaasi u horseedi doonto mandaqida Geeska Afrika xasilooni daro iyo xurgufo hor leh oo abuura xiisaddo colaadeed” ayuu ku yiri khudbadiisa Axmed Siilaanyo.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu si wayn uga digay in cunaqabateynta hubka xilligan laga qaado Soomaaliya wuxuuna yiri ” Waxaan si wayn uga digayaa in qowmiyadda Soomaaliyeed la dhex dhigo utun iyo arami sabab u noqon karta cawaaqib xumo aan laga soo kaban”.
Madaxweyne Siilaanyo wuxuu ku sheegay khudbadiisa in ay ugu baaqayaan sida hadalka uu u dhigay “dalka aan dariska nahay ee Soomaaliya” in aan ku wada noolaanno nabad iyo niyad sami oo aanay waqti iska lumin.
“Anigoo madashan iyo munaasabadan ka faa’ideysanaya waxaan ugu baaqayaa dalalka midowga Yurub, Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Midowga Afrika, Jaamacada Carabta iyo dawladdaha ku bohoobay urur goboleedka IGAD inay garwaaqsadaan qadiyadda Qaranimada Somaliland isla markaana ixtiraamaan xaqa aayo katashiga Shacabigeenna” ayuu yiri madaxweynaha Somaliland.
Waxaa kale oo uu madaxweynaha Somaliland sheegay in inkastoo aduunku aqoonsan Somaliland haddana dalal badan ugula dhaqmaan si dal madaxbannaan taasina aanay ahayn mid ku timid sahal..
New Customs management at Mogadishu airport spotted $34,000 missing taxation within two days
Shirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay arrimaha amniga, dardargelinta fulinta qorshaha 90ka maalmood, Imtixaanada Dugsiyada sare, Shirkii London, bilicda caasimada iyo arrimo kale.